सभामुख अग्नि सापकोटालाइ शुभकामना दिंदै कांग्रेसले भन्यो, 'अर्को महरा नबन्नु' - Himali Patrika
सभामुख अग्नि सापकोटालाइ शुभकामना दिंदै कांग्रेसले भन्यो, ‘अर्को महरा नबन्नु’
हिमाली पत्रिका १२ माघ २०७६, 1:34 pm
१२ माघ, काठमाडौं । ‘सभामुख निर्वाचित गर्न यथेष्ट मत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो उम्मेदवार प्रस्तुत गरिसकेको र सभामुख पद आफैंमा तटस्थ रहनुपर्ने पद भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दल आफ्नो तर्फबाट सभामुख पदमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्दछ’ सभामुख चुन्न आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘हाम्रो निर्णय यति मात्र हो । यो निर्णयमा लेखेको भन्दा घटी पनि होइन, बढी पनि होइन । बाहिर ब्याख्या, विश्लेषण घटीबढी सबै भयो ।’
त्यसोभए सापकोटालाई कांग्रेसको पनि समर्थन नै हो त ? वा अहिले नै त्यो अर्थमा बुझ्नु हतार हुन्छ ?
पहिला डा. रिजालको सम्बोधनको यो अंश पढौं-
पहिलो : यो प्रतिनिधिसभासम्म कसरी आइपुग्यौं, यो इतिहासलाई हामी बिसर्न सक्दैनौं । इतिहास सम्झने हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकतान्त्रिक मुलधारको कुरा यही हलमा गर्नुभएको थियो । उहाँले लोकतान्त्रिक मूलधारको कुरा गर्दा सँगै हस्ताक्षर गर्ने र साक्षी बस्ने नेताहरु पनि यहाँ हुनुहुन्छ । त्यसैले, आज पनि हामी लोकतान्त्रिक मूलधार निर्माण गर्ने अविरल यात्रामा छौं ।
एउटा अवाज बलियोसँग आएको छ, भोलिको दिन विधिको शासन चल्छ चल्दैन ? संविधानले भनेअनुसारको बाटोमा देश हिँड्छ हिँड्दैन ? लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्चिन्छ खुम्चिन्न ? आशंका छ । त्यसैले होला, सबैभन्दा बलियो र कडा स्वरमा नागरिक समाज र आम नागरिकले शंकाको कुरा गर्नुभएको छ । त्यो बाटो पार लाग्छ कि लाग्दैन ? सापकोटाले त्यो काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ?
मैले यति भन्नुपर्छ, माननीय सापकोटा अहिले सभामुखका लागि प्रस्तावित व्यक्ति हुनुहुन्छ । सभामुख भइसकेपछि एउटा ठूलो रुपान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जसले आशंका गर्नुभएको छ, उहाँहरुको भरोसा जित्न सक्नहुन्छ कि हुन्न ? हाम्रो चासो छ ।
कांग्रेसले आज प्रतिनिधिसभामा उभिएर विपक्षका रुपमा भन्ने हो- तपाईबारे उब्जिएका आशंकालाई भोलि काम गर्ने क्रममा कसरी शान्त पार्दै जानुहुन्छ, त्यो तपाईको परीक्षा हो । त्यो परीक्षामा हाम्रोतर्फबाट सहयोग हुन्छ । यसकारण कि प्रतिनिधिसभा सरकारलाई सदैव उत्तरदायी राख्ने संस्था हो ।
संस्थाको अनुहार वा मुख सभामुखका रुपमा तपाईले काम गर्न थालेपछि हिजोको विगतभन्दा आगत महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो आगतले यी कुरालाई आश्वस्त गर्न सकोस् । मनमा चिन्ता लिएर हिँड्नेहरु, लोकतान्त्रिक बाटोमा कठिनाइ आउला कि ? हिजोको दुई पक्षमध्ये एक वा अर्कोको सोचबाट संसद सञ्चालन होला कि भन्ने चिन्ता गर्नेहरुलाई आश्वस्त गर्ने काम गर्नुहोला । हाम्रो शुभकामना छ । गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्न आउने दिनमा यही ठाउँमा बसेर हेर्छौं । गर्दासम्म तपाईलाई हाम्रो सहयोग रहन्छ । गर्न नसकेको दिनमा हामीले लामो लोकत्रान्त्रिक यात्रामा हिँडेका व्यक्ति र संस्थाहरु सबैसँग उभिन सक्नुपर्छ र त्यो प्रतिवद्धता छ ।
दोस्रो : कांग्रेस आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत छ । सँगसँगै १२ बुँदे समझदारीबाट सुरु भएको यात्राबाट शान्तिलाई स्थायी बनाउन चाहन्छौं । लोकतन्त्रलाई चिरस्थायी बनाउन चाहन्छौं । संविधान चिर स्थायी बनोस् । संविधानभन्दा बाहिरको बाटो कसैले खोज्नु नपरोस् । हामी यो यात्रामा छौं ।
यो यात्रामा सुरु गर्दा हामी सात दलमध्ये एउटा दल थियौं । माननीय अग्नि सापकोटा माओवादी पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । हामीले संविधानसम्म पुग्ने कुरा पनि १२ बुँदेको दोस्रो नम्बरमा लेख्यौं- हामी संविधानसभामा पुग्छौं, जनताको सार्वभौम अधिकार प्रत्याभूत हुने संविधान बनाउँछौं, शान्तिलाई स्थायी गर्छौं ।
तर, नेताहरुका अनुसार कांग्रेसलाई यो डर पनि छ कि सभामुखका रुपमा सापकोटा कतै अर्को महरा त बन्दैनन् ? सांस्कृतिक रुपमा हैन, संसदमा खेल्ने भूमिकाका हिसाबमा अर्को महरा ।
तर, महराको डेढवर्षे कार्यकालमा सभामुख र कांग्रेस पटक-पटक आमने-सामने भए । महरा सभाको अनुहार बन्न नसकेको र ओली सरकारको लाचार छाँया मात्र बनेको गम्भीर आरोप प्रतिपक्षले लगायो ।
हिजो महरा पनि प्रचण्डकै कोटामा सभामुख बनेका थिए, जसरी अहिले सापकोटा आएका छन् । झन् योपटक सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा नेकपाभित्रै (ओली र प्रचण्डबीच) ठूलै रस्साकस्सी चलेको थियो । त्यसैले सापकोटाले नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वास जित्ने प्रयास गर्नेछन् र यसो गर्दा महराले झै संसदीय मर्यादा बिर्सेलान् कि भन्ने कांग्रेस नेताहरुमा डर छ ।
एक सांसद भन्छन्, ‘हिजो तत्कालीन सभामुख महराले प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्न खोज्दा संसदको नियम, परम्परा तोड्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको पनि विश्वास जित्न सक्नुभएन । अहिले पनि हामीलाई डर छ कि फेरि त्यही अवस्था त दोहोरिने होइन ?’
‘नागरिक समाज र आम नागरिकको शंका’ भन्दै डा. रिजालले उठाएको प्रश्न पनि शायद यहीँनेर हो ।
कांग्रेस नेताहरुमा सभामुख सापकोटाप्रति आशंकासँगै चिन्ता पनि देखिएको छ, कतै संक्रणकालीन न्याय झन बिथोलिने त होइन ? काभ्रेका अर्जुन लामाको ह त्या गरेको आ रोप मा सापकोटा समेतलाई विपक्षी बनाएर लामाकी प त्नी पूणिर्मा याले प्र हरी मा उ जु री हालेकी छन् । र, यो उजुरीलाई मानवअधिकारकर्मी र अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि माओवादी नेताहरु मु छि एको प्रतिनिधिमूलक घ ट ना का रुपमा अगाडि ल्याएका छन् ।
त्यसैले भोलि यही विषयलाई देखाएर नेपालको द्व न्द्व का लीन मु द्दा लाई थप गिजोल्ने र अन्न राष्ट्रि यकरण गर्ने बाटो त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता रहेको एक कांग्रेस सांसदले सुनाए ।
शायद, त्यसैतर्फ संकेत गर्दै कांग्रेस सांसद रिजालले सापकोटालाई शुभकामना दिएका हुन्, ‘हिजोको पक्ष होइन, आगतमा सभामुखको अनुहार बन्न सक्नुहोस् ।’ साभार : अनलाइनखबर